China Ihe Mgbochi Mgbidi Ihe Mgbapụta Mmepụta na Mmepụta | Akwa Ugbo
Polyurethane nrapado maka ákwà mgbochi mgbidi mgbidi ihe njikọ
Gluing usoro: ntuziaka squeegee / igwe mama / igwe mpịakọta mama
Mgbidi ákwà mgbochi bụ mgbidi dị n'èzí nke ụlọ ahụ. Ọ naghị ebu ibu ma kpọgidere dị ka ákwà mgbochi, ya mere a na-akpọkwa ya "mgbidi mgbochi". Ọ bụ mgbidi dị nfe dị mfe na mmetụta ịchọ mma nke a na-ejikarị eme ihe n'oge a nnukwu na ụlọ dị elu. Youxing Shark na-eme nyocha nyocha banyere njirimara na teknụzụ njikọta nke ihe dịka okwute, iko, aluminom veneer, aluminom-plastic panel, mbadamba ụrọ, na mbadamba anwụ maka ịwube mgbidi mgbidi, ma mepụta ihe ọhụrụ ma mepụta nnukwu ike, dị elu -weatherability Polyurethane sealant nwere ike mezuo mkpa nke ogwugwo icho mma ichoro. A na-ebu uzo kọlụm (ma ọ bụ beam) nke mgbidi mgbochi akụkụ ahụ na isi ụlọ ahụ, wee tinye ụdọ (ma ọ bụ kọlụm). Kọlụm na ogidi ahụ na-etolite na ntanetị, a na-edozi ngwongwo ihe ahụ n'ime ihe ndị dị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, wee dezie ya na kọlụm na ọkụ. Na eriri. A ga-ebufe ibu site na ngwongwo ihe ngwongwo ngwongwo na isi ihe site na kọlụm (ma ọ bụ beam). Ọzọkwa mgbidi mgbochi na-agụnye mgbidi mgbochi otu, mgbidi mgbochi na-akwado ya, mgbidi mgbochi iko zuru oke, mgbidi mgbochi iku ume ọgụgụ isi, mgbidi mgbochi fotoelectric, mgbidi mgbidi mgbidi, mgbidi ụlọ.
ákwà mgbochi mgbidi ihe njikọ
aluminum efere, agba aluminum efere, na ndị ọzọ na ákwà mgbochi ogwe
ebuanu aluminom na isi ihe ndi ozo
Mgbidi mkpuchi ụlọ na-ezo aka na mgbidi na-enweghị ibu nke mgbidi ụlọ, nke a na-ejikarị ogwe (iko, efere ọla, efere okwute, efere seramiiki, wdg) na ihe nkwado (ogidi ọkụ aluminom, akụkụ ígwè, ọgịrịga iko, Ejiri mgbidi na ogwe osisi na-akwado mgbidi ahụ, nke nwere ike ịnwe ikike ịmegharị ihe metụtara usoro ahụ, ma kesaa envelopu ụlọ ma ọ bụ ihe ịchọ mma nke etinyere isi ụlọ ahụ. mgbidi mgbochi bụ mgbidi dị n'èzí nke ụlọ ahụ. Ọ naghị ebu ibu ma kpọgidere dị ka ákwà mgbochi, ya mere a na-akpọkwa ya mgbidi kwụ ọtọ. Ọ bụ mgbidi dị fechaa nke nwere mmetụta ịchọ mma nke a na-ejikarị eme ihe n'oge a nnukwu na ụlọ dị elu. Ọ bụ ụlọ envelopu na-ewu ụlọ nke mejupụtara ya na usoro ihe eji arụ ya, ọ naghị eburu ibu na ọrụ nke isi ihe.
Curable na ụlọ okpomọkụ / pụrụ ịgwọ site na kpo oku
Oge na-arụ ọrụ dị ogologo, ngwaahịa viscosity ngwaahịa a sara mbara, ma a ga-enweta mmetụta ọgwụgwọ dị elu n'okpuru ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche.
Ike nkedo nke ihe nkedo na ihe nkedo di n'etiti ihe nkedo na ebe ejikọtara ya di elu. O nwere ike ijide n'aka na efere ndị ahụ agaghị agbawa mgbe ha jikọtara ọnụ, na ike mgbatị ahụ bụ ≥6Mpa (a na-ejikọta efere aluminom na efere aluminom).
N'ihi na ndị ahịa 'ntuziaka squeegee mkpuchi, igwe mkpuchi, spraying, oyi na ịpị, na-ekpo ọkụ na ịpị Filiks, ha niile nwere ezi mkpuchi mmetụta. A na-ekesa mama ahụ n'ụzọ zuru oke na igwe anaghị egbochi ya.
O nwere ike ijide n'aka na efere ndị ahụ agaghị agbawa mgbe ejikọtara ha, na ike ike bụ ≥6Mpa (aluminom na-ejikọta ya na efere aluminom)
Nke gara aga: Interiorchọ Mma Ime Obodo Rail
Osote: Bgbọ njem Board Refrigerated